मलेसियामा नेपाली कामदारहरुलाई मु,द्दा फिर्ता लिन कम्पनीको ध,म्की’ (जानकारीका लागि सेयर गराै) – Taja Khawar
मलेसियामा नेपाली कामदारहरुलाई मु,द्दा फिर्ता लिन कम्पनीको ध,म्की’ (जानकारीका लागि सेयर गराै)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २०, २०७८ समय: १७:०८:२६
कम्पनीविरुद्ध नेपाली, भारतीय र म्यानमारका कामदारले मु,द्दा दायरा गरेका थिए । जसको नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने नेपाली कामदारलाई मु,द्दा फिर्ता लिन कम्पनीले पटकपटक ध,म्की दिएको कामदारले बताएका छन् ।
मैले यहाँको नागरिक (मलेसियन)लाई त तह लगाइरेको छु । तिमीहरु को हो र ? तिमीहरुलाई घर जान मन छैन ? कम्पनीका मानव संशाधनका प्रमुखको भनाई उद्रृत गर्दै गोलेले भने, ‘मैले गरेर तिमीहरुले आफ्नो परिवार पालेको छौ ।
पहिला तिमीहरुको चप्पल लगाउने हैसियत थिएन । अहिले मैलेभन्दा राम्रो जुत्ता लगाउन पाएका छौं । यो के,स फिर्ता गरेनौं भने भोलीको दिनमा जे पनि हुनसक्छ भनेर हामीलाई ध,म्क्यायो ।
कम्पनीले ध,म्कीपछि १५ जना कामदारले मु,द्दा फि,र्ता गरेको गोलेले बताए । तर, गोलेहरुले भने मु,द्दा फि,र्ता गर्नुको सट्टा कम्पनीबाट असुरक्षा भएको भन्दै स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । यसको बदलामा कम्पनीले मु,द्दामा हस्ताक्षर गर्नेहरुको करार अवधि थपिदिएन । सयजना भन्दा बढी नेपालीलाई कम्पनीले भिसा थपिदिएन । भिसा नथपेपछि नेपाल फर्किनुपर्‍यो, गोलेले भने ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कम्पनीले स्थानीय श्रम कानुनलाई सम्मान गर्दे कामदारले पाउनुपर्ने सेवासुविधा दिनुपर्ने बताए । जो कामदार मुद्दा हालेर नेपाल गएका छन्, उनीहरु नेपाल पुगे पनि पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित गरिदिनु हुँदैन, राजदूत पाण्डेले भने, मुद्दाको अन्तिम फैसाला नआएसम्म कम्पनीमा रहेका नेपालीमाथि कम्पनीले कुनै वाधा व्यवधान पुर्‍याउनु हुँदैन भनेर हामीले कम्पनीलाई भनेका छौं । हाम्रो संदेश डटकम बाट साभार
Last Updated on: June 3rd, 2021 at 5:09 pm
६४२ पटक हेरिएको